11/01/2018 - Page 3 sur 3 -
«Misy baomba !»
Milaza ho manana “baomba” mahery vaika, ary hipoaka tsy ho ela ilay teratany marokana mizaka zom-pirenena frantsay, voarohirohy ho nikasa hanao kidnapping, nitana fitaovam-piadiana mahery vaika an-tsokosoko, ary nisandoka andraikitra nosamborin’ny mpitandro filaminana, kanefa votsotra …Tohiny
Zandarimariam-pirenena : Azo tsapain-tanana ny ady amin’ny kolikoly
“Azo tsapain-tanana fa nody ventiny tsikelikely ny rano natsakaina”. Io fehezanteny io no nentin’ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard, sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena namehezana ireo dingana sy ezaka vitan’ny teo anivon’ity vondron-kery ity teo amin’ny resaka kolikoly. …Tohiny
Tetsy amin’ny minisiteran’ny Atitany no nanamarihana ny fanombohana ny androm-pirenena ho an’ny fanadiovana, ka nanome voninahitra izany ireo mpikambana anaty governemanta. Nitarika an’izany kosa ny praiminisitra lehiben’ny Governemanta Olivier Solonandrasana. Taorian’izay dia samy nanatontosa ny …Tohiny
Nanao fanambarana ny filohan’ny antoko TIM, Marc Ravalomanana, ny faha-9 Janoary lasa teo fa vonona hifampiraharaha amin’i Andry Rajoelina ny tenany satria samy “businessman” izy roalahy. Marihina moa fa maherin’ny 500 ny aina nafoy nandritra …Tohiny